Muqdisho dadka u dhintay Corona Virus oo korodhay | Berberanews.com
Home WARARKA Muqdisho dadka u dhintay Corona Virus oo korodhay
Muqdisho dadka u dhintay Corona Virus oo korodhay
Waxaa sare u sii kacaya tirada dadka uu ku dhacay iyo kuwa u dhintay xanuunka Coronavirus ee Soomaaliya. tiradii u dambaysay ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ay saartay ayaa ahayd in 835 oo qof laga helay xanuunka, taasoo laba laab ka badan halkii tiradaas ay maraysay 10 maalmood ka hor. Tirada dhimashada ayaa iyana iminka maraysa 38 qof, sida ay dawladdu sheegtay.
Hase yeeshee dad badan waxay aaminsan yihiin in tiradu ay intaas aad uga badan tahay, halka sarkaal ka tirsan maamulka gobolka Banaadir uu dhawaan sheegay in boqolaal qof dad gaadhaya ay xanuunka u dhinteen.
Dhanka kalena, waxaa soo baxaysa in tiro badan oo dad ah maalin kasta lagu aaso qubuuro kala duwan oo ku yaalla duleedka Magaalada Muqdisho. isla sidoo kalena dhawaan ayay ahayd markii wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya, uu isna sheegay in cid kasta oo dhimata ay u tixgelinayaan in coronavirus dilay. Cumar Cali Cumar oo ugu yaraan laba goor dad ku soo aasay qubuurahaas ayaa sawir ka bixinaya bal wixii uu ku soo arkay oo iiga warramay
Previous articleSomaliland: Guddi ku dhawaaqay Sanduuq qaadhaan-uruurin furan
Next articleKhabiir ku dhawaaday helidda daawada coronavirus oo lagu dilay Maraykanka